रोकिएन नेपालको विकेट पतन, उपकप्तान ऐरी पनि सस्तैमा आउट - Everest Dainik - News from Nepal
रोकिएन नेपालको विकेट पतन, उपकप्तान ऐरी पनि सस्तैमा आउट
काठमाडौंः थाइल्याण्डमा जारी एसीसी इस्टर्न रिजन पुरुष टी–२० कपमा हङकङले दिएको १ सय ५५ रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको नेपालले तेस्रो विकेट ९,५ ओभरमा गुमाएको छ ।
नेपालले तेस्रो विकेटका रुपमा ओपनर उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई व्यक्तिगत ५ रनमा गुमाएको हो । यसअघि नेपालले कुसल मल्ललाई १९ र पारस खड्कालाई ४ रनमा गुमाइसकेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले १० ओभरमा महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाएर ६८ रन बनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपालले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? (सूचीसहित)
यसअघि टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको हङकङले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ५४ रन बनायो । उसका लागि निजाकत खान मोहम्मदले ४८, मोहम्मद ऐजाज खानले २९, हारुन मोहम्मद अरशदले २७, शाहिद वसिफले २६ र जेम्स जोन एटकिन्सन १३ रन बनाए । अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । बलिङमा नेपाली टीमका सन्दीप लामिछाने, सुशन भारीले २–२ र कुसल मल्लले एक विकेट लिए ।
याे पनि पढ्नुस थाइल्याण्डविरुद्ध बलिङ गर्दै नेपाल, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
जारी प्रतियोगितामा हङकङको यो पहिलो म्याच हो । पहिलो खेल हारेपछि अघिल्लो चरण प्रवेशको संभावना कायम राख्न नेपाल आज जित्नै पर्ने दबाबमा छ । एसिया कप छनौटमा पुग्न शीर्ष दुईमा पर्नुपर्ने भएकाले आज पनि पराजित भए नेपालको संभावना झिनो र गणितीय मात्रै बाँकी रहनेछ । हङकङविरुद्ध पनि नेपाली टीमले मलेसियासँग खेलेकै प्लेइङ ११ मा उतारेको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाललाई तेस्रो सफलता, दीपेन्द्रले दिलाए विकेट (LIVE)
आज पनि भुवन कार्की, सन्दीप जोरा र किशोर महतोले प्लेइङ ११ मा मौका पाउन असफल भएका छन् । प्रतियोगितामा नेपाल र मलेसियासहित थाइल्यान्ड, सिंगापुर र हङकङले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । राउण्ड रोबिन आधारमा चल्ने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले एसिया कप छनोटमा स्थान बनाउने छन् ।
ट्याग्स: इस्टर्न रिजन पुरुष टी–२० कप, एसीसी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, नेपालबिरुद्ध हङकङ